Abanye abantu babuka onogwaja cute futhi ubuka ezifuywayo, sivame ucabange ukuthi izihlobo zabo abahlala ubuso izilwane zasendle ngesihluku, kuholele efanayo ukuphila izinkathazo futhi nje ziklaba otshanini aluhlaza ezikhula izimfunda. Kodwa lokhu akulona iqiniso, njengoba usuku ngalunye ulubheka ngabo - ke kuyimpi ukusinda. unogwaja Wild uhlale beyofuna okungenani abanye ukudla, kungakhathaliseki inkathi, futhi namanje kufanele afihlele zonke izinhlobo eziyingozi.
Yingakho lezi zilwane ezincane isakhiwo umzimba, sibonga ngalo kuyoba lula ukuba basinde kule kwezimo ezinzima imvelo. Basuke endowed amakhono esiyingqayizivele yezimayini ukudla kwawo ngaphansi eqhweni, babe ukuzwa kakhulu, wabavumela ukuba uzwe kusondela nomzingeli at ibanga amathathu ngamamitha, ngisho noma akusiyo emhlabathini, sintanta emoyeni.
Kubukeka sengathi Unogwaja unogwaja zasendle. Incazelo ke ungaqala neqiniso ukuthi yayincane. Ubude umzimba zokhahlamba kusuka ngamasentimitha 32 kuya 46, kuyilapho isisindo saso singamakhilogremu amakhilogremu esingaphansi kwezinsuku ezimbili. imilenze Hind has esingaphansi nezinye izinhlobo ze-onogwaja kanti onogwaja, nazo kanye izindlebe amade.
coloration Non-iyunifomu sinikezwe unogwaja zasendle. Izithombe ukumbonisa ukuthi lesi silwanyana has ijazi phezulu sinombala-grey, ngezinye izikhathi ephethe tinge ngokubomvu. Esiswini kanye ichopho umsila kancane lighter singatsheki Okubukwe olumhlophe strip esidlulayo endaweni encane ethangeni eliphezulu.
unogwaja Wild, ngokungafani hare lumelele unyaka akashintshi umbala walo, kwenzeka kuphela njengoba kulindeleke, ezimbili molting - entwasahlobo and ekwindla.
Lapho ingabe baqhubeka bephila?
Ekuqaleni, lezi zidalwa ezincane wahlala kuphela yeNhlonhlo Yase-Iberia, kodwa sibonga imisebenzi yezolimo, lapho esezinzile cishe wonke amazwekazi ngaphandle Antarctica, nase-Asia.
Okwamanje uhlalwe unogwaja zasendle e-Russia, e-Ukraine, futhi emazweni amaningi eYurophu nase-Afrika. Ngaphezu kwalokho, lesi silwane esincane ingatholakala kwi Eziqhingini zasePacific nasolwandle-Atlantic lubhekisele oLwandle iMedithera.
Lezi zilwane ukuphila kuphela lapho kukhona izihlahla kanye izihlahla ezincane, kodwa futhi bangaphila emaqeleni, ihlathi amabhande emasimini. bahlezi zihluke ukuthi elenyoni ophilayo njengoba unogwaja zasendle kudinga umhlaba zavela kancane. Umndeni lezi zilwanyana ungathola kanye ngokuthula emhlabathini, endaweni okuyinto zokhahlamba kusuka amahektha ezintathu amabili. Ukuze uthole khona ngokunethezeka, bemba bashone ezidlekeni zawo siqu, sifinyelela phezulu amathathu metres ubude.
izilwane Ikhaya encane
Lezi Imigudu kungabonwa kunoma yiziphi izindawo evulekile ngesimo sezwe nzima, ukuthi yilapho kumbiwa yabo unogwaja ayo zasendle. Lapho akuphilayo, lesi silwane esincane kancane, lapho owandile inhlabathi sandy kuphela, ngakho-ke kwaba lula futhi kuwusizo kakhudlwana ukuze umbe ezidlekeni zawo siqu.
Ngaphansi kwezimo ezinzima kakhulu sokusinda sicashe lezi zilwane ngangokunokwenzeka ngaphanzi komhlaba, lapho ungakwazi ukufihla kude izilwane ezidla ezinye. Kube bachitha ingxenye enkulu yokuphila kwabo. Lezi Burrows bemba ikakhulukazi nabesifazane, futhi kuthatha isikhathi esiningi. Sinenkosi uhlobo isidleke kweminyango ezintathu kwamanzi.
Ngakho, unogwaja zasendle ngokwemvelo kungenzeka kaningi e nemihosha, gullies osebeni emaweni kolwandle noma ngasezinkwalini esishiywe dengwane. Lezi zilwane akazange okwesabisa komakhelwane nomuntu ukuze bakwazi axazulule ngisho emaphethelweni nemizana futhi ngezinye landfills ahlukahlukene.
Lapho lezi zilwanyana ukhethe endaweni ethile ngoba ekuphileni kwabo, nakanjani uphawu imfihlo yayo elimnandi ezivezwa nezindlala isikhumba. Ngokuphambene, onogwaja, onogwaja zasendle akuzona yokuphila aqhelelene futhi bazohlala amaqembu (ka 7-11 ngabanye). Imindeni yabo kunalokho eziyinkimbinkimbi isakhiwo phezulu.
unogwaja Wild at yokudla kwabo akuvumelani asuke imbobo phambidlana kwekhulu amamitha. Ngakho-ke, ukudla kwawo akuyona ahlukahlukene ikakhulukazi. It ahluke kuphela ihlobo nobusika ukudla. Ngenkathi efudumele izilwane ezincane kudla emacembe kanye utshani. Uma eduze namakhaya abo, kukhona amasimu izingadi, bese lezi zilwane badle ulethisi, iklabishi, zonke izinhlobo impande izitshalo nokusanhlamvu.
Nge indlela yamakhaza, onogwaja ezomile utshani ezihambayo wemba aphume izingxenye phansi izitshalo. Ngaphezu kwalokho, ebusika basengaba adle amahlumela emagxolweni izihlahla noma nezihlahla.
Lezi zilwane ezincane abhekwa uvundile impela. Zichitha cishe unyaka wonke. Doe kungaba gestate inzalo mayelana kathathu isizini ngayinye. Ukukhulelwa kulezi izilwane ihlala cishe inyanga eyodwa. Inombolo onogwaja udoti ziyahlukahluka kusuka 4 kuya ku-12, kuye ngokuthi indawo yemvelo kanye nobudala kukamama. Ngakho, unyaka kunalokho kungase kubangelwe namazinyane azo 20 kuya 50. Ngemva kwamahora ambalwa enze ukulethwa insikazi ilungele sokukhwelana futhi.
Onogwaja enjalo elikhula ngokushesha ngenxa yokuthi emavikini ekucala kakhulu ezine ngemva kokuzalwa ezidla ubisi lwebele kuphela. Ngemva kwezinyanga ezinhlanu, bona zase zifinyelele kakade kusukela kwabasanda kweva eshumini ashiye umndeni wakhe yakha yayo.
Kuyini ukubaluleka lezi zilwane abantu?
It kuvela ukuthi kuphela lolu hlobo unogwaja zasendle European ziye zathanjiswa abantu. Ngakho-ke, lokho kubhekwa njengokuzijabulisa ukhokho wabo bonke izinhlobo zasekhaya, ngaphandle kokukhetha, lezi zilwane ezincane.
zizalela yabo okwamanje baqashwe ensimini ka ezindaweni ezihlukahlukene nokongiwa kwemvelo kanye kuyo. onogwaja European bayindlala abalimi abaningi njengoba ingasetshenziswa ukuthuthukisa zohlobo zilwane ezifuywayo.
Ngaphezu kwalokho, kufanele atitfobe ukudoba ngenxa uboya bayo amahle inyama emnandi. Yingakho unogwaja ubhekwa imikhakha ebaluleke kakhulu kwezolimo.
Njengoba ukufuywa kwamakamela onogwaja zasendle esiboniswe ezingaphezu kuka ayisikhombisa kwezinhlobo ezahlukene izilwane. Phakathi kwabo kukhona feather ezahlukene, zokuhlobisa, kanye nalezo ezisetshenziswa ukuhlola imithi emisha ukudla laboratories.
Kodwa ngaphezu ukusetshenziswa lezi zilwane zasendle kwamanye amazwe, lapho azikho izitha, kungaletha ingozi enkulu kubantu, ukudla kuwo wonke amasiko, kulimaze Amasimu, izitshalo, kanye ne-port emazweni Burrows eziningi. Ngokwesibonelo, eziqhingini zasePacific bahamba bayocekela phansi izimila ngokuphelele, okuholela ukuguguleka kwenhlabathi futhi ukubhujiswa ugu, okwakubonisa kwezinyoni zasolwandle yokwakha isidleke.
Kufinyeta, singayazi esiphethweni sokuthi lezi zilwane ezimangalisayo zivumelane ngokuphelele bazivumelanisa abahlala endle, ngakho-ke abakwazi ukugcina imiphakathi yabo.
Easter inkukhu (hook) isikimu. Ijezi ukukhilosha lephasika izinkukhu
Indlu ngokhonkolo evundile: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo yokwakha